My World: အိပ်စက်ခြင်းကပြောတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေး
ရက်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်းမှာ အိပ်ရေးပျက်ထားတာတွေကို ပြန်ပြီးဖြည့်တင်းဖို့လိုအပ်တာကြောင့် weekend တွေကို သိပ်ပြီးနှစ်သက်ကြတယ်။ "အဲဒါဟာ အိပ်ရေးမဝတာကို ပြန်ရယူဖို့ ကြိုးစားကြတာ" လို့ ဘော်စတွန်က အမျိုးသမီးဆေးရုံနဲ့ ဘာမင်ဂန်က အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ Circadian မူမမှန်မှုများဌာန အကြီးအကဲ Charles Czeisler က ပြောပါတယ်။ Czeisler က နောက်ကျမှ အိပ်စက်ခြင်းကို အားပေးထောက်ခံသူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူက"အအိပ်မှောက်မှားခြင်း"လို့နာမည်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအအိပ်မှောက်မှားတာဟာ ကိုယ်တို့ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းစက်ဝိုင်း/ အချိန်ဇယားကို ပိုပိုပြီး ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်စေတယ် လို့ ပြောတယ်။ မျက်လုံးအလှုပ်အရွေ့(Rapid Eye Movement) ရပ်တာနဲ့ နှေးကွေးတဲ့အချိန်(Non-REM sleep) ဇယားလည်ပတ်မှုမှာ အိပ်စက်မှုဖြစ်ကြတယ်။ REM နဲ့ Non-REM တို့ဟာ ခန့်မှန်းခြေ မိနစ် ၉၀ မှာ တစ်လှည့်စီပြောင်းကြတယ်။ နားရက်မှာ အိပ်ချိန်ပှံမှန်ထက်ပိုအိပ်ကြတော့ အလုပ်ပြန်တက်ရတဲ့နေ့တွေမှာ နိုးထလိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းနာရီတွေအတွက် စိတ်ရှုပ်ထွေးတာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ပိုတာလိုတာအသားမကျနိုင်ဖြစ်ရတော့တယ်။ အဲဒီလို ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ဇီဝနာရီနဲ့ တကယ့်အိပ်ချိန် ဇယားမကိုက်ညီတာကို Czeisler က social jet lag ရောဂါစုလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ lifestyle ကို အလေ့အကျင့်တစ်ခုလို ပြုလုပ်သွားတာဖြစ်နေတယ်။ အိပ်ချိန်တွေပိုယူတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို အလေ့အကျင့်ဟာ ပုံမှန်အိပ်စက်ချိန်ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ကြတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သူတို့ရဲ့အိပ်ချိန်စက်ဝိုင်းဇယားထဲမှာပဲ လိုအပ်တဲ့အိပ်ချိန်မရဘဲ လွဲချော်နေတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ လွဲချော်တာထက် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အိပ်ချိန်ပုံမှန်ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်လို့ သူက ဆိုတယ်။
နေ့ခင်းအချိန်မှာ တစ်မှေးအိပ်တာက နိုးကြားမှု၊ လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ စိတ်အလျဉ်ကို တိုးတက်လောက်အောင် အံ့အားသင့်စရာတွေလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာအနားရသွားစေတယ်။ မိနစ် ၂၀-၃၀ ထက် ပိုမကြာတဲ့ တစ်မှေးလောက် အိပ်စက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ညအိပ်ချိန်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးလောက်အောင်၊ ဒယီးဒယိုင်/ မူးနောက်နောက်ဖြစ်သွားလောက်အောင်အချိန်အတော်ကြာ တစ်မှေးမှေးတတ်တာကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပထမဆုံး ပုံမှန်ညအိပ်ချိန်တွေမှာ အိပ်ချိန်မှန်တာပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ အိပ်ချိန်မပြည့်ခဲ့ရင် လိုအပ်သွားတဲ့အိပ်ချိန်ကို များနိုင်သမျှများများ၊ မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ပြန်ပြီးအစားထိုးအိပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်မှေးမှေးခြင်းက အများကြီးကူညီပေးတာမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ ညမှာ အိပ်ရေးဝခဲ့ရဲ့သားနဲ့ နေ့တိုင်း တစ်မှေးမှေးချင်နေတာဟာလည်း တစ်ခုခုအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာမျိုး ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ "နေ့ခင်းမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲမှေးစက်ကြတာတွေဟာ အိပ်ချိန်မပြည့်တာ၊ နာတာရှည်ပုံစံ၊ ညဘက်အိပ်ချိန်တွေအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်တာ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ချိန်မှာ အသက်ရှုရပ်တဲ့အကြိမ်တွေများတာ/ အသက်မျှင်းမျှင်းဖွဖွလေးပဲရှုတာ စတဲ့ ပုံမမှန်မှုမျိုး၊ စိတ်ကျတာနဲ့ ကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလာတတ်ပါတယ်။ လို့ Czeisler ကပြောပါတယ်။ ယူကေ University of Warwick က ပရော်ဖက်ဆာ Francesco Cappuccio နဲ့ အဖွဲ့က ကျန်းမာရေးအကြောင်း နေ့စဉ်တစ်မှေးမှေးခြင်းက ဘာတွေပြောလဲ တွေ့ရှိထားတာတွေရှိကြတယ်။ နေ့ခင်း တစ်နာရီအောက်/ တစ်နာရီထက်ပို မှေးစက်တဲ့အကျင့်ရှိသူ ယူကေက အမျိုးသား ၁၆၀၀၀ နဲ့အမျိုးသမီးတွေပါ လေ့လာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ တွေ့ရှိကြတာက ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ကျန်းမာရေးလက္ခဏာတွေ သတိထားစရာဖြစ်လာတာကိုပါ။ အထူးသဖြင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်။ ပုံမှန်မှေးစက်ကြတာဟာ ရောဂါတွေတိုးဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တယ် လို့ Cappuccio က ဆိုတယ်။ အလေ့အကျင့်လိုဖြစ်နေတဲ့ တစ်မှေးမှေးခြင်းက ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတယ်။ ညက အိပ်ချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝမရခဲ့လို့ နောက်တစ်နေ့တစ်မှေးမှေးခြင်းပုံစံမျိုးလောက်ပဲ သတိထားဖြည့်တင်းပေးသင့်တာလို့ ပြောပါတယ်။ မြေထဲပင်လယ်စတိုင်လ် "မှေးစက်ခြင်းတွေ" တော့ ဒီလေ့လာချက်မှာ မပါဝင်ကြဘူး။ ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာ "ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ" လို ဖြစ်နေကြတယ်။ မြောက်ပိုင်းဥရောပတိုင်းပြည်တွေမှာ နေ့လယ်ခင်းမှေးစက်ဖို့ တိုက်တွန်းကြလေ့ရှိပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေတိုးလာတာရဲ့ နောက်ကွယ်က အကျိုးအကြောင်း ရှာဖွေလေ့လာဖို့ လိုနေဆဲပါပဲ။ "မှေးစက်ခြင်းဟာ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တော့ သက်သေမပြနိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးဟာ တစ်ညမှာ အိပ်ရာထဲ ၈-၉ နာရီအချိန်ဖြုန်းနေပြီး နေ့ခင်းပိုင်းတွေမှာ ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ မူမမှန်ဘူးလားဆိုတာ ကျန်းမားရေးဆေးစစ်မှုပြုလုပ်ရပါတော့မယ်။
ခြောက်နာရီထက် အိပ်ချိန်နည်းတဲ့အခါ လိုနေတဲ့အိပ်ချိန်တွေ စုပုံလာတော့တယ်။ jet lag အမျိုးအစားအိပ်ချိန်ချို့တဲ့တာ၊ ကလေးငယ်တွေပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတာ၊ ညနက်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ မနက်စောစောထရတာတွေအပါအဝင် အိပ်ချိန်ချို့တဲ့တာတွေ များလာတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့နာရီတွေပြန်ရဖို့ တစ်ကြိမ်နဲ့ပဲ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပြီး လန်းဆန်းသွားသင့်တယ်။ "တစ်ကြိမ်ထဲနဲ့ လိုနေတဲ့အိပ်ချိန်တွေပြန်မပေးနိုင်ကြဘူး" စုပုံလာတဲ့အချိန်ပိုအိပ်ချိန်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပေးပြီး နေ့တိုင်းလို တစ်မှေးမှေးဖို့လိုအပ်လာတာကို ရည်ညွှန်းပြီး Czeisler ကပြောတာပါ။ Czeisler လေ့လာထားချက်အရ ရက်သတ္တတစ်ပတ်ကနေ နှစ်ပတ်လောက် အိပ်ချိန်တွေပျက်ကွက်ခဲ့ပြီဆိုရင် ပြန်ပြီးဖြည့်တင်းသင့်ပါပြီ။ အဲဒီထက်ပိုလွန်သွားခဲ့ရင် စိတ်ပိုင်းအရ ပိုအိပ်ဖို့လည်းခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ချိန်ချို့တဲ့တာပြန်ပြီးဖြည့်တော့မယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တော့ ပိုပြီးမအိပ်နိုင်ပါဘူး။ "အိပ်ရာထဲမှာ ၁၄ နာရီနေနိုင်တောင်မှ တကယ်အိပ်ချိန်ဟာ ၈ နာရီပဲ ရှိနိုင်မှာပါ။ အိပ်ရေးပျက်ခဲ့တာ တစ်ပတ် နှစ်ပတ်ကကျော်လွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြန်ဖြည့်တင်းဖို့တောင်ခက်ခဲသွားပြီး မောပန်းနွမ်းနယ်တဲ့ လက္ခဏာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဲဒီထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခု ပြလာနိုင်တယ်။ အိပ်ချိန် ၁၂ နာရီရှိနေပြီဆို တစ်ခုခုမှားယွင်းနေပြီပေါ့ လို့ Czeisler က ဆိုတယ်။
အကြောင်းပြစရာမရှိ အလွန်အမင်းအိပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။ အသက် ၄၂ ကနေ ၈၁ နှစ်အရွယ် တစ်ညကို ၈နာရီထက်ပိုပြီး အိပ်နေကြတဲ့သူတွေနဲ့ ၄ နှစ်ကြာ သုတေသနပြုလုပ်ထားတဲ့ ယူကေလေ့လာချက်တစ်ခုမှာ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ သွေးအလုံအလောက်လည်ပတ်မှုမရှိဘဲ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေရုတ်တရက်သေဆုံးတဲ့ stroke မျိုးဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်တက်လာတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ အိပ်ချိန်တွေပိုယူအိပ်စက်နေတာ အချိန်ကာလကြာရှည်လာခဲ့ပြီဆိုရင် နောက်ပိုင်းဘဝအချိန်တွေမှာ နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက် အမှတ်အသားတစ်ခုလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ "အချိန်သိပ်များများကြီး အိပ်တယ်လို့တော့ မထင်မိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အိပ်ရာထဖို့ ခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင် အဲဒီအခြေအနေမှာ အကြောင်းပြချက်တွေရှိနေပါပြီ" လို့ Cappuccio က ပြောပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေဆိုတာ ကြာရှည်အိပ်တဲ့နာရီတွေများလာတယ်ဆိုရင် နှလုံးပြဿနာတွေအလွန်မှာ စိတ်ကျရောဂါသတိပေးလက္ခဏာတွေ၊ ရောဂါကူးစက်လွယ်တာနဲ့ ရောင်ရမ်းတဲ့အခြေအနေတွေပါဝင်လာပြီး တချို့ဆို ကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်တွေတွေ့လာတယ်လို့ Cappuccio က ယုံကြည်ပါတယ်။ အချိန်ပိုကြာကြာအိပ်တာဟာ ဒီလိုရောဂါတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ Cappuccio က ဆိုတယ်။ အိပ်ချိန်မရှိတာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ချိန်နေ့ဆိုင်းညဆိုင်းအပြောင်းအလဲတွေကြားမှာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတာ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးဖိအားမြင့်တက်တာ၊ stroke နဲ့ အဖြစ်များတတ်တဲ့ အအေးမိတာတွေ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေတဲ့ အထောက်အထားတွေတော့အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိပ်ချိန်ပိုတာကိုတော့ အိပ်ရာထဲ ပျင်းရိနေတာလို့ပဲ ရိုးရိုးစင်းစင်းသိထားကြတယ်။ အိပ်ချိန်ပိုတာကြောင့် ထိခိုက်တာတွေအကြောင်း လူသိနည်းကြတယ်။ "ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက ရောဂါကူးစက်တာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက တစ်နေ့ကို နာရီ ၂၀ လောက်အိပ်တဲ့အချိန်ပေါ့" လို့ Czeisler က ပြောပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက Czeisler ဟားဗာဒ့် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့အတွက် တက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အနေအထားပါ။ အိပ်ချိန်တွေအများကြီးယူထားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တယ် လို့ သူကဆိုတယ်။ အခြေအနေတော်တော်များများမှာတော့ ပြန်ပြီးကျန်းမာစေဖို့ ပံ့ပိုးပေးတာကြောင့် အိပ်စက်ခြင်းဟာ လိုအပ်လှတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားပါ
အိပ်စက်တဲ့အချိန်နာရီတွေကို အထူးဂရုစိုက်ပေးဖို့ ထိုက်တန်လှတယ်။ အိပ်ရာထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်စေဖို့ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး/ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ "ကြာချိန်၊ အချိန်ကိုက်မှုနဲ့ အိပ်စက်တဲ့အရည်အသွေးတွေဟာ အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပါ" လို့ Czeisler ကပြောပါတယ်။ အိပ်ချိန်ပိုကဲတာနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြားက ဆက်သွယ်မှုတွေအကြောင်းကိုတော့ အမှန်တကယ်သိရှိနားလည်စေဖို့ လေ့လာမှုတွေပိုပြီး ပြုလုပ်ရဦးမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာတော့ အားလပ်ရက်တွေမှာ အချိန်ပိုယူအိပ်စက်တာနဲ့ အိပ်မက်တွေထဲ အလုပ်တွေအကြောင်းလောင်းထည့်နေတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်တဲ့သူဟာ အမြော်အမြင်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တာ အသေအချာပါ။ ။
Source: Sleeping late? Napping all the time? What your sleep says about your health | CNN Living